Yakanyanya Kugadzikana crane Mugadziri uye Fekitori |Tongli
High-speed njanji chigaro
Module simba mu cabinet
Tangi yekudziya mvura
Yakadzikama crane, pasi pemamiriro ekugutsa ergonomics, kushandiswa kwetekinoroji yekudzora, pneumatic yakaenzana crane ine yakazara kumiswa basa, inogona kushandiswa zvakanyanya muakasiyana ekubata zvinhu zviitiko.
Balance crane imhando nyowani yemidziyo yekusimudza zvinhu, inoshandisa yakasarudzika spiral yekusimudza nzira kusimudza zvinhu zvinorema, pachinzvimbo chebasa remaoko kudzikisa kuwanda kwevashandi vemishini.
Ne "yakaenzana giravhiti", iyo chiyero crane inoita kuti kufamba kuve nyore, kuponesa-kushanda, nyore uye kunyanya kukodzera mabasa anogara achibata uye kusangana, izvo zvinogona kuderedza zvakanyanya kusimba kwevashandi uye kuvandudza kushanda zvakanaka.
The balance crane ine mabasa ekuchekwa kwemhepo uye misoperation dziviriro.Kana iyo huru yemhepo inopihwa ichigurwa, iyo yekuzvivharira mudziyo inoshanda kudzivirira iyo bharanzi crane kubva pakudonha kamwe kamwe.
Iyo bharanzi crane inoita kuti gungano rive nyore uye nekukurumidza, kumira kwacho kwakaringana, zvinhu zviri munzvimbo yetatu-dimensional nzvimbo yekumisa mukati meyakayerwa sitiroko, uye zvinhu zvinogona kutenderedzwa nemawoko kumusoro uye pasi, kuruboshwe uye kurudyi.
Iko kushanda kweiyo chiyero chekusimudza chigadziriso chiri nyore uye chiri nyore.Ese mabhatani ekudzora anonamirwa pamubato wekutonga.Kubata kwekushanda kunobatanidzwa ne workpiece material kuburikidza nekugadzirisa.Saka chero bedzi iwe uchifambisa mubato, iyo workpiece zvinhu zvinogona kutevera.
Pneumatic balance crane features
A. Ergonomic kumusoro uye pasi kuturika kudzora kwakakodzera chinja kumhanya uye yakanaka tuning mutoro
B. Kana sosi yemhepo ikavhiringwa kamwe kamwe, midziyo inogona kudzivirira kukukurwa kwemutoro
C. Kana mutoro ukangoerekana wanyangarika, chitubu chebrake centrifuge chinongomira kumhanyisa kukwira kwetambo.
D. Pasi pehuwandu hwemhepo, mutoro unofanirwa kusimudzwa haungapfuuri huwandu hwehuwandu hwezvigadzirwa
E. Dzivirira mitoro yakarembera kuti isadonha kupfuura masendimita matanhatu (152 mm) kana mhepo yakadzimwa.
F. Kusvika 30 ft (9.1 m) pakureba uye kusvika 120 mu (3,048 mm) mukureba zvichienderana nerudzi rwetambo
Zvakapfuura: Manipulator Aine Suction Cup
Zvinotevera: Trolley mobile manipulator
Air Balancer Jib
Cylinder Kusimudza Manipulator